အမျက်ဒေါသဖြင့် စာမရေးသင့်ကြောင်း (Never Write in Anger by Tom Hayton) - Myanmar Network
အမျက်ဒေါသဖြင့် စာမရေးသင့်ကြောင်း (Never Write in Anger by Tom Hayton)
Posted by Myanmar Network on May 30, 2011 at 15:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကရာတေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက “ကရာတေးနိ ဆန်း တေ နရှိ” “ကရာတေးမှာ ကိုယ်ကစပြီး တိုက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး” ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဆိုရိုးစကားကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အမျက်ဒေါသနဲ့ မတိုက်ရပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် kata လို့ခေါ်တဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုက်ကွက်အားလုံးက ခုခံပိတ်ဆို့မှုနဲ့ စတင်ပါတယ်။
စာရေးသားရာမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒေါသတကြီးနဲ့ စာ၊ အီးမေးလ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် SMS ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် အမျက်ဒေါသကြောင့် စိတ်မကြည်လင်ဘဲ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်တာလည်း ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အတွက် ဦးတည်ချက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဥပမာ-လင်းလင်းက သူမျှော်မှန်း ထားသလို ရာထူးမတိုးဘူး ဆိုပါစို့၊ အဲဒါကြောင့် အထက်အရာရှိဆီကို အီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါတယ်။
I can’t believe I didn’t get the job. You encouraged me to go for it and gave me the impression I hadagood chance. And you gave it to someone with less experience than me. The only course of action I can see is to quit ...
ကျွန်မ ဒီရာထူးကို မရတာ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။ ရာထူးတိုးအောင် ကြိုးစားပါ၊ ရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောထားပြီးတော့ အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့လူကို ပေးလိုက်တယ်။ အခုအချိန်မှာ လုပ်စရာကတော့ အလုပ်ထွက်ဖို့ တစ်ခုဘဲ ကျန်တော့တယ် ...
လင်းလင်းရဲ့ မကျေနပ်ချက်က ကြောင်းကျိုး ခိုင်လုံနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူသာလျှင် ရာထူးတိုးဖို့ အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးသူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရေးလိုက်တဲ့ စာကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် ရလဒ်ကတော့ အထက်အရာရှိ ဒေါသထွက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာ အထက်အရာရှိက အောက်ပါအတိုင်းပြန်ကြားလာနိုင်ပါတယ်။
Fine. Perhaps I can make things easier for you by asking you to clear your desk.
ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင်လည်း မင်းအတွက် အဆင်ပြေသွားအောင် ငါကဘဲ စီစဉ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ စားပွဲရှင်းပြီး အလုပ်ထွက်တော့။
လင်းလင်းက အလုပ်ထွက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့ အထက်အရာရှိကို ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်ပုံမှာ ပြဿနာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်တဲ့အတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလို့မရတော့ဘူး။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ခြိမ်းခြောက်တာ တစ်ကယ်တမ်းစိတ်ထဲက မပါဘူး ဆိုရင် အထက်လူကြီးက ခြိမ်းခြောက်တဲ့အတိုင်း လုပ်တော့လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် အဲဒီ ခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့အတိုင်း ဆက်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားမှာပါ။ အသားတင် အကျိုးခံစားခွင့်ကတော့ သုညပါပဲ။
ဒါဆိုရင် ရာထူးမတိုးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကို အေးအေးဆေးဆေး ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရပါ့မလဲ။
တကယ်တမ်း စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ချဉ်းကပ်ပုံတစ်ခုကတော့ အပြင်ထွက်၊ စာရွက်တစ်ရွက်ယူပြီးတော့ စိတ်ခံစားချက်တွေ အကုန်လုံးကို ချရေးလိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရုံးထဲပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ အဲဒီစာရွက်ကို ဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုပြောတာဟာ အကျိုးမရှိ အချိန်ဖြုန်းသလိုထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ထုတ်ဖော်လိုက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရသွားပြီး အဲဒီမကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို သင်္ကေတအဖြစ်နဲ့ ဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားရွေးချယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း စာ ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ စာကြမ်းအနေနဲ့ သိမ်းထားတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်နည်းနည်း အေးသွားတဲ့အထိ နာရီအနည်းငယ် ထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ ပြန်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ စိတ်ဆိုးနေတုန်း ဒေါသတကြီးနဲ့ ရေးထားတဲ့စာကို တကယ်တမ်း ပို့ချင်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီးတော့ မေးနိုင်ပါတယ်။
လင်းလင်းက သူ့ခံစားချက်တွေကို သိအောင် ပြောပြချင်နေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု စိတ်နည်းနည်း ငြိမ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရာထူးတိုးဖို့ ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသနေတဲ့ သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို ဖော်ပြနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဦးမှု ရယူပြီး အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ သဘောထား၊ ခြုံငုံပြီးတော့ ရှုမြင်တတ်ပုံ၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တတ်ပုံ၊ မိမိအကြောင်း မိမိသိရှိပုံ၊ ခေါင်းဆောင်မှု ကျွမ်းကျင်မှု စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းရေးသားနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းရေးသားနိုင်ပါတယ်။
I’m obviously disappointed I didn’t get the promotion this time round but I appreciate I still haveafew things to learn. Perhaps we could sit down some time when you’re free and talk through some areas for improvement?
ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ရာထူးတိုးမခံရတဲ့အတွက် ကျွန်မ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာသင်ယူစရာ ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာတော့ နားလည်ပါတယ်။ အချိန်ရတဲ့အခါမှာ တွေ့ဆုံပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နယ်ပယ်အချို့အကြောင်း ပြောပြနိုင်မလား။
နောက်ပိုင်းမှာ ကော်ဖီသောက်ရင်းနဲ့ လင်းလင်းရဲ့အထက်အရာရှိက ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ကို ဒီလိုပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
‘‘I thought Ling took it very well – we need to give her some new responsibilities to make sure she remains motivated. We need to hold on to people like her ...’’
“လင်းလင်းကတော့ စိတ်နေသဘောထားမဆိုးဘူး။ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်တတ် ကြွနေအောင်တာဝန်အသစ်နည်းနည်းပေးဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။ သူ့လိုလူမျိုးမဆုံးရှုံးရတာကောင်းတယ် ...”
ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ စာမရေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတာဟာ သူများတွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် ငုံ့ခံနေဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံရမယ့် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေကို အပြုသဘော တုံ့ပြန်ပြီး မိမိရဲ့ အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အချိန်တွေမှာ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုပြီး ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုတာအမှန်ပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်မိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
(Tom Hayton ၏ Never Write in Anger အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/never-write-in-anger-by-tom မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
ကရာတေး ကြှမျးကငျြသူတှကေ “ကရာတေးနိ ဆနျး တေ နရှိ” “ကရာတေးမှာ ကိုယျကစပွီး တိုကျတယျဆိုတာ မရှိဘူး” ဆိုတဲ့ ဂပြနျဆိုရိုးစကားကို ကငျြ့သုံးကွတယျ။ အမကျြဒေါသနဲ့ မတိုကျရပါဘူးတဲ့။ ဒါကွောငျ့ kata လို့ချေါတဲ့ သတျမှတျထားတဲ့ တိုကျကှကျအားလုံးက ခုခံပိတျဆို့မှုနဲ့ စတငျပါတယျ။
စာရေးသားရာမှာလညျး ဒီအတိုငျးပါပဲ။ ဒေါသတကွီးနဲ့ စာ၊ အီးမေးလျ၊ ဒါမှမဟုတျရငျ SMS ပို့လိုကျမယျဆိုရငျ အမကျြဒေါသကွောငျ့ စိတျမကွညျလငျဘဲ ညှိနှိုငျးပေါငျးစပျဆောငျရှကျတာလညျး ပြောကျကှယျနတေဲ့အတှကျ ဦးတညျခကျြအောငျမွငျမှာမဟုတျပါဘူး၊ ဥပမာ-လငျးလငျးက သူမြှျောမှနျး ထားသလို ရာထူးမတိုးဘူး ဆိုပါစို့၊ အဲဒါကွောငျ့ အထကျအရာရှိဆီကို အီးမေးလျပို့လိုကျပါတယျ။
ကြှနျမ ဒီရာထူးကို မရတာ ယုံတောငျမယုံနိုငျဘူး။ ရာထူးတိုးအောငျ ကွိုးစားပါ၊ ရာထူးတိုးနိုငျပါတယျလို့ ပွောထားပွီးတော့ အတှအေ့ကွုံနညျးတဲ့လူကို ပေးလိုကျတယျ။ အခုအခြိနျမှာ လုပျစရာကတော့ အလုပျထှကျဖို့ တဈခုဘဲ ကနျြတော့တယျ ...
လငျးလငျးရဲ့ မကနြေပျခကျြက ကွောငျးကြိုး ခိုငျလုံနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တကယျတမျး သူသာလြှငျ ရာထူးတိုးဖို့ အကောငျးဆုံးအသငျ့တျောဆုံးသူ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူရေးလိုကျတဲ့ စာကွောငျ့ ဖွဈလာမယျ့ ရလဒျကတော့ အထကျအရာရှိ ဒေါသထှကျတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုးဆုံးအနအေထားမှာ အထကျအရာရှိက အောကျပါအတိုငျးပွနျကွားလာနိုငျပါတယျ။
ဟုတျပါပွီ။ ဒါဆိုရငျလညျး မငျးအတှကျ အဆငျပွသှေားအောငျ ငါကဘဲ စီစဉျပေးလိုကျပါ့မယျ။ စားပှဲရှငျးပွီး အလုပျထှကျတော့။
လငျးလငျးက အလုပျထှကျမယျလို့ ခွိမျးခွောကျပွီးတော့ အထကျအရာရှိကို ဖိအားပေးဖို့ကွိုးစားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီခဉျြးကပျပုံမှာ ပွဿနာနှဈခုရှိပါတယျ။ ပထမတဈခုကတော့ ခွိမျးခွောကျလိုကျတဲ့အတှကျ စစေ့ပျညှိနှိုငျးလို့မရတော့ဘူး။ ဒုတိယအခကျြကတော့ ခွိမျးခွောကျတာ တဈကယျတမျးစိတျထဲက မပါဘူး ဆိုရငျ အထကျလူကွီးက ခွိမျးခွောကျတဲ့အတိုငျး လုပျတော့လို့ ဆုံးဖွတျလိုကျလို့ရှိရငျ အဲဒီ ခွိမျးခွောကျထားတဲ့အတိုငျး ဆကျလုပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျတော့ အူကွောငျကွောငျ ဖွဈသှားမှာပါ။ အသားတငျ အကြိုးခံစားခှငျ့ကတော့ သုညပါပဲ။
ဒါဆိုရငျ ရာထူးမတိုးဘူးဆိုတဲ့ သတငျးကို အေးအေးဆေးဆေး ဘယျလိုတုံ့ပွနျရပါ့မလဲ။
တကယျတမျး စိတျမခမျြးမသာဖွဈနရေငျ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ခဉျြးကပျပုံတဈခုကတော့ အပွငျထှကျ၊ စာရှကျတဈရှကျယူပွီးတော့ စိတျခံစားခကျြတှေ အကုနျလုံးကို ခရြေးလိုကျတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ရုံးထဲပွနျဝငျသှားပွီးတော့ အဲဒီစာရှကျကို ဆုတျဖွဲပဈလိုကျပါ။ ဒီလိုပွောတာဟာ အကြိုးမရှိ အခြိနျဖွုနျးသလိုထငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလို လုပျလိုကျမယျဆိုရငျ စိတျဆိုးနတေဲ့ ခံစားမှုတှကေို ထုတျဖျောလိုကျဖို့ အခှငျ့အလမျးရသှားပွီး အဲဒီမကောငျးတဲ့ စိတျခံစားမှုတှကေို သင်ျကတေအဖွဈနဲ့ ဖကျြဆီးလိုကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခွားရှေးခယျြနိုငျတဲ့နညျးလမျးကတော့ စိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး စာ ရိုကျလိုကျပွီးတော့ စာကွမျးအနနေဲ့ သိမျးထားတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ စိတျနညျးနညျး အေးသှားတဲ့အထိ နာရီအနညျးငယျ ထားလိုကျပါ။ ပွီးတော့မှ ပွနျကွညျ့ပါ။ အဲဒီအခါမှာ စိတျဆိုးနတေုနျး ဒေါသတကွီးနဲ့ ရေးထားတဲ့စာကို တကယျတမျး ပို့ခငျြသလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျပွီးတော့ မေးနိုငျပါတယျ။
လငျးလငျးက သူ့ခံစားခကျြတှကေို သိအောငျ ပွောပွခငျြနသေေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု စိတျနညျးနညျး ငွိမျသှားပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ ရာထူးတိုးဖို့ ထိုကျတနျကွောငျး ပွသနတေဲ့ သူ့ရဲ့ကောငျးကှကျတှနေဲ့ လုပျရညျကိုငျရညျကို ဖျောပွနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ လကျဦးမှု ရယူပွီး အလုပျလုပျတတျတဲ့ သဘောထား၊ ခွုံငုံပွီးတော့ ရှုမွငျတတျပုံ၊ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျတတျပုံ၊ မိမိအကွောငျး မိမိသိရှိပုံ၊ ခေါငျးဆောငျမှု ကြှမျးကငျြမှု စသညျဖွငျ့ ထညျ့သှငျးရေးသားနိုငျပါတယျ။ အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့အတိုငျးရေးသားနိုငျပါတယျ။
ဒီတဈကွိမျမှာ ရာထူးတိုးမခံရတဲ့အတှကျ ကြှနျမ စိတျပကျြမိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လလေ့ာသငျယူစရာ ကနျြနသေေးတယျဆိုတာတော့ နားလညျပါတယျ။ အခြိနျရတဲ့အခါမှာ တှဆေုံ့ပွီး တိုးတကျကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမယျ့ နယျပယျအခြို့အကွောငျး ပွောပွနိုငျမလား။
နောကျပိုငျးမှာ ကျောဖီသောကျရငျးနဲ့ လငျးလငျးရဲ့အထကျအရာရှိက ဒါရိုကျတာတဈယောကျကို ဒီလိုပွောတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
“လငျးလငျးကတော့ စိတျနသေဘောထားမဆိုးဘူး။ ဆကျပွီးတော့ လုပျခငျြကိုငျခငျြစိတျတတျ ကွှနအေောငျတာဝနျအသဈနညျးနညျးပေးဖို့ လိုမယျထငျတယျ။ သူ့လိုလူမြိုးမဆုံးရှုံးရတာကောငျးတယျ ...”
ဒေါသတကွီး ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ စာမရေးဖို့ သတျမှတျထားတာဟာ သူမြားတှေ ဘာပဲလုပျလုပျ ငုံ့ခံနဖေို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ ဘဝမှာ တှကွေုံ့ရမယျ့ အခကျအခဲ အကပျြအတညျးတှကေို အပွုသဘော တုံ့ပွနျပွီး မိမိရဲ့ အကောငျးဆုံး အကြိုးစီးပှားကို စောငျ့ရှောကျဖို့ဘဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့ အခြိနျတှမှော တိုကျခိုကျပွောဆိုပွီး ကိုယျ့ရပျတညျခကျြကို ကာကှယျဖို့ လိုတာအမှနျပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ထိခိုကျအောငျ မလုပျမိဖို့ပဲ လိုပါတယျ။
(Tom Hayton ၏ Never Write in Anger အားဆီလြျောသလို ဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ ရေးသားထားသော မူလဆောငျးပါးနှငျ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျ ဆောငျးပါးမြားအား ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။)
အထကျပါ ဆောငျးပါးအားကူးယူ၍ အခွား website နှငျ့ blog မြားတှငျ တငျမညျဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/never-write-in-anger-by-tom မှကူးယူကွောငျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါရနျ။
Permalink Reply by Queen on May 31, 2011 at 16:28
good thx for sharing :)
Permalink Reply by phyu hnin kyaw on May 31, 2011 at 19:29
Permalink Reply by susumarmcgrath on May 31, 2011 at 20:54
Permalink Reply by 1xu4bgnd0hm20 on June 1, 2011 at 16:42
Permalink Reply by minnyanthar on June 3, 2011 at 19:08
Permalink Reply by ဆုရည်မေ on June 4, 2011 at 10:54
Permalink Reply by 3jspmzg10lyas on June 4, 2011 at 13:38
ွှThanks for sharing.
Permalink Reply by pannei on June 9, 2011 at 12:10
Permalink Reply by Nwaynway on June 15, 2011 at 12:38
Thank you so muach for sharing .
Permalink Reply by Tinzar Swe on June 21, 2011 at 16:38
Good way to practise
Permalink Reply by candle on June 22, 2011 at 15:24
Permalink Reply by snake on June 24, 2011 at 11:21
ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီး တော့ အဲ့ဒီ့နေ့က အမှားမလုပ်မိလိုက်တော့ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။